Fikambananana | Fiahonambe ara-Panatanjahantena ny Malagasy "RSM"
Ny RSM dia voarindran'ny vondron'olona Mpanentana Malagasy monina aty Amerika Avaratra. Ireo mambra rehatra ao amin'ny Fikambanana dia miara miasa amin,nmy maha " bénévole" azy ireo.
Ny RSM dia tsy mitsahatra ny mivaotra hatramin'ny niandohany. Maro ny fiovana sy fomba fanao izay tsy maintsy manarapenitra. Koa miezaka hatrany ny Mambra ny Fikambanana sy ny Komity Mpikarakara isan-taona manatsara hatrany ny Fiaonambe hatao isan-kerintaona.
Izay no niorenan'ny RSM FOIBE taorian'ny RSM 2009.
Ny "RSM Foibe"
HO avy tsy ho ela ny fandika ny Takelaka etsyt ambany...